अफगानिस्तानमा १८ वर्ष पुरानो युद्ध अन्त्य होला त ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
अफगानिस्तानमा १८ वर्ष पुरानो युद्ध अन्त्य होला त ?
भदौ १२, २०७६ बिहिबार ११:५५:१९ | एजेन्सी
तालिबानले कतारमा अमेरिकासँग भैरहेको वार्ता अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै नै सकारात्मक खबर आउन सक्ने बताएको छ ।
यदि अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति वार्ता सफल भयो भने आफगानिस्तानमा १८ वर्षदेखि चलिरहेको अस्थिर अवस्था समाप्त हुन सक्छ । यो अफगान शान्ति वार्ताको पहिलो चरण हो र यसपछि दोस्रो चरणको वार्ता सुरु हुनेछ ।
अमेरिकी सुरक्षा बलले अफगानिस्तानबाट बाहिरिने आफ्नो योजना राख्नेछ । दुई पक्ष मिलेर अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट कहिले फिर्ता हुने विषयमा निर्णय गर्नेछन् ।
यसको अलावा तालिबानले अफगानिस्तानले भविष्यमा अन्य देशका लागि खतरा अवस्थाको सिर्जना नगर्ने र अलकायदा जस्ता चरमपन्थी समूहसँग सम्बन्ध नराख्ने ग्यारेण्टी दिनेछ ।
यही दुई विषयमा गएको एक वर्षदेखि तालिबान र अमेरिकाबीच शान्ति वार्ता चलिरहेको छ र अहिले वार्ताको नवौँ चरण चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यी दुई विषयमा सम्झौता हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसपछि तालिबान र दोस्रो अफगानिस्तान एकआपसमा बस्नेछन् र अफगान शान्ति वार्ताको दोस्रो चरण सुरु हुनेछ ।
दोस्रो चरणको वार्तामा आफगान सरकार पनि सामेल हुनेछ । एक टिम तालिबानको हुनेछ र अर्काे टिम राजधानी काबुलबाट आउनेछ । काबुलको टिममा वर्तमान सरकारका सदस्यका अलावा सिभिल सोसाइटी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुनेछन् । यो एक किसिमको समावेशी प्रतिनिधिमण्डल हुनेछ ।
यद्दपि यी दुई पक्षबीचको वार्ता कहिले पूरा हुन्छ भनेर समय तोक्न सकिएको छैन । यी दुई पक्षले अफगानिस्तानको भविष्यको तरिका कस्तो हुन्छ, चुनावको केही भूमिका हुन्छ कि हुँदैन, यसको अलावा महिलालाई अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा वार्ता गर्नेछन् । जुन निकै मुश्किल मामिला हुनेछ ।
दोस्रो चरणको वार्तामा अमेरिकाको भूमिका पनि त्यति हुनेछैन, किनकि अमेरिकाले केवल पर्यवेक्षकको भूमिका निभाउन सक्नेछ ।
पछिल्लो १८ वर्षमा अफानिस्तानमा पहिलो पटक सैन्य शक्ति नभइ वार्ताको माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन सकिने नतिजा सबै पक्ष पुगेका छन् ।
कसरी स्थानीय देश र क्षेत्रीय शक्तिहरुको सहयोग र समर्थन हासिल गर्न सकिन्छ, यो निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । किनकि अफगानिस्तानमा यो लडाइ केवल अफगानिस्तानको मात्र होइन यसको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ ।
तालिबान र अफगानिस्तान सरकार कुन हदसम्म सम्झौताको लागि तयार हुन्छन्, यही नै कठिन र मुश्किल परिस्थिति हुनेछ । तालिबानका लागि अफगानिस्तानमा विदेशी सुरक्षा बलको उपस्थिति ठूलो विषय हुनेछ । यो विषय हल भैसकेपछि अफगास्तिान भित्र एक घरेलु संवादको ढोका खुल्नेछ ।
त्यही संवादमा प्रणाली कस्तो प्रकारको हुन्छ, अधिकार कस्ता हुनेछन् र तालिबानको भूमिका के हुन्छ भन्ने बारेमा बहस हुनेछ ।